Inde: tohanan’ny Airtel ny fifaninanana « Techfest » | NewsMada
Inde: tohanan’ny Airtel ny fifaninanana « Techfest »
Tanora dimy mianadahy, 19 sy 20 taona, handeha handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena “Robotic Challenge”, hatao any Inde ny 14 hatramin’ny 16 desambra ho avy izao.
Manohana tanora mikirakira ny siansa sy ny teknolojia ny Airtel Madagascar, ho fanatevenana ny fahaizan’izy ireo. Efa nisy tamin’ireo ny nandray anjara tamin’ny fifaninanana “App Challenge” natao tany Singapour sy ny “First Global Challenge” tany Washington DC sy tany Mexico. Niavaka hatrany ny zava-bitan’ny tanora malagasy, tsara toerana tamin’ireo fifaninanana ireo, ka izao mbola vonona ny hanohana azy ireo izao indray ny Airtel.
Manomana ny fifaninanana « Techfest » ny Indian Institute of Technology any Mumbai, lehibe indrindra mahakasika ny siansa sy ny teknolojia vaovao any Azia amin’izao taonjato diavintsika izao. « …Raha fahaizana noforonina ny fisokafana lehibe ho an’ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny, manampy betsaka izany ho an’ny tany an-dalam-pandrosoana hamahana ireo olana isan-karazany, ohatra, ny amin’ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny tontolo iainana sy ny maro hafa mahasoa ny zanak’olombelona ka mahatonga anay manohana ireto ekipa tanora malagasy ireto », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Maixent Bekangba, omaly, tao amin’ny foiben’ny Airtel, raha nampahafantatra ireo tanora ireo.
Razafiarison Irina sy Rasoamanana Diamondra, efa nandray anjara tany Washington DC ; Randriarimanana Tsiresy Milà, efa tany Mexico. « Natao ho an’ny rehetra ny siansa, toy ny robot, ary mampisokatra anay hahita lalan-kafa izao fandraisanay anjara izao», hoy Rakotoarimanana Miantra sy ilay tovovavy tokana, Ramanantsoa Christelle, avy ao amin’ny Cnam*.
Tsy misy fandraisana anjaran’ny fanjakana ny amin’ny fanampiana ireo tanora ho any Inde ireo, milaza ho tsy manana tetibola ho amin’izany. Nefa mora mahita tetibola ireo olom-panjakana ambony sy ny mpiara-dia aminy rehefa mivoaka any ivelany.